हेपिएको खाना सिस्नोको शक्ति:: Naya Nepal
सिस्नो भन्ने बित्तिकै गरिबको खाना अर्थात् हेपिएको खाना। कमैको भान्सामा पाक्ने खान्की। गरिब-दुःखीले ‘सिस्नोको खोले खाएको’ भन्दै यसलाई अभावको बेला प्राण धान्ने खान्कीको रुपमा लिने गरिन्थ्यो। तर पछिल्ला दिनमा सिस्नो धनीले पनि औषधि सम्झेर खोजीखोजी खान थालेका छन्।
कुनै बेला अभावमा छाक टार्ने सिस्नो अहिले पाँचतारे होटलको मेनुमा समावेश भएको छ। त्यतिमात्र होइन, यो झोलिलो खानेकुराले स्वाद र स्वास्थ्य दुवैलाई लोभ्याउँदै छ। गजब त के छ भने, सिस्नो हाम्रो पाखापखेरामा जताततै पाइन्छ। सस्तो अनि सुलभ पनि। त्यसमाथि अहिले हामीले खाने खाना जसरी विषाक्त हुँदै गएको छ, सिस्नोमा त्यो भय छैन। किनभने सिस्नो विशुद्ध अर्ग्यानिक उत्पादन हो। यसको उत्पादनमा न किटनाशकको प्रयोग गर्नुपर्छ, न कृत्रिम भण्डारणको खाँचो नै।
अल्लो वा चाल्ने सिस्नो नेपालको पहाडी भूभागका जङ्गलहरूका खुला स्थान, खोला तथा बाटोको छेउछाउका ओसिलो स्थानमा पाइने वनस्पति हो। बहुवर्षीय पोथ्रा वर्गमा पर्ने यो वनस्पति ३ मिटरसम्म अग्लो हुने गर्छ। सिस्नो जस्तै देखिए पनि अल्लो १२०० मिटरभन्दा माथि मात्रै पाइन्छ। यो वनस्पतिको जमिन माथिको भाग मसिना तिखा विषालु काँडाहरूले ढाकेको हुन्छ। काण्डको बोक्राबाट प्राप्त हुने रेसा नरम, बलियो र चम्किलो हुने भएकोले यसको रेसा धागो उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। अल्लो धागोबाट जुत्तादेखि टोपीसम्मका विभिन्न कपडा,झोला आदि बनाइन्छ।
सिस्नोमा पाइने झुस जस्तो फर्मिक अम्ल र पोल्ने जलन हुने र हिस्टामाइले सुन्निने भएकाले सिस्नोले छुँदा निकै दुख्ने र पोल्ने हुन्छ र त परापूर्वककालमा सिस्नोले सबैलाई तर्साउने गरिन्थ्यो। अंग्रेजीमा यसलाई नेटल भनेर चिनिन्छ। मध्यपहाडी तथा उपत्यकामा पाइने पोल्ने झार नै सिस्नो हो र यसमा धेरै औषधीय गुण पाइएको छ। यसमा हुने भिटामिन ए, भिटामिन सी, भिटामिन डी लौहतत्व, पोटासियम, म्यागानिज, क्याल्सियम जस्ता पौष्टिक पदार्थको कारण उत्तरी तथा पूर्वी युरोपमा यसको झोल लामो समय देखि प्रचलित छ।
सिस्नोमा २५ प्रतिशतसम्म प्रोटिन हुन्छ। त्यसैले यो शाकाहरीहरूको लागि अति उत्तम भोजन हो। यो अति मूल्यवान ‘गउडा चिज’ र यार्गमा स्वादको लागि प्रयोग गरिन्छ। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको वृद्धि तथा अन्य झारहरूको प्रसारले सिस्नो पहिले जस्तो जताततै पाइँदैन।
धनीका लागि औषधी सावित हुँदा सिस्नो तारे होटलमा पनि!
नेपालको पाँचतारे होटेलको मेनुमा पनि सिस्नो निकै लोकप्रिय छ। यसलाई संसारकै अति स्वस्थकर खानाको सूचीमा समेत राखिएको छ। देश बाहिर यसलाई सुप, तरकारी, चिया, जुस, औषधि आदिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। पात मात्र नभएर यसको जरासमेत उपयोगी छ। सिस्नो स्वादिष्ट त हुन्छ नै पोषणले पनि भरिपूर्ण हुन्छ। तर हाम्रो गाउँघर, बनपाखामा सजिलै पाइने सिस्नुलाई भने हामीले हेला गरिरहेका छौं। स्तरीय होटलहरुमा पनि अहिले नेपाली पहिचानको खाना भनेर सिस्नोको सुप र अन्य परिकार विदेशलाई पस्कन थालिएको छ।
कसरी खाने सिस्नो?
– सामान्यतया: सिस्नोलाई पखाली उम्लेको तातोपानीमा राखी घोटेर पकाउने प्रचलन छ। विशेषगरी यसमा नुन, खुर्सानी, टिमुरको धुलो, लसुन, मकैको च्याख्ला राखेर पकाइन्छ।
– तर, विदेशमा बटरमा प्याज, लसुन, लिक, गाँजर, फुराएर भेज स्टक र आलु राखेर सिस्नो पकाइन्छ। यसलाई बल्याण्ड गरेर छानिन्छ। अन्त्यमा नुन, मरिच र क्रिम हालेर नेटल सुपको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रचलन छ।
– सिस्नुको चिया पनि त्यत्तिकै प्रचलित छ। यसलाई निकै स्वास्थ्यवर्द्धक पनि मानिन्छ। यसलाई ग्रिन-टीकै तरिकाले सेवन गरिन्छ। र, जुसको रुपमा पनि पिउन सकिन्छ।
– सहजताका लागि अहिले सुपरमार्केटमा सिस्नोको पाउडर पनि उपलब्ध हुन्छ। यसलाई सुप या तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
– सिस्नोको फूलको सुप बनाएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसलाई भात या मकैको च्याख्लासँग सेवन गर्दा निकै स्वादिष्ट हुन्छ।
औषधीय गुण बोकेको सिस्नो
– उच्च रक्तचापको समस्या छ भने पनि सिस्नोको सेवन गर्दा हुन्छ। यसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नमा सघाउ पुर्‍याउँछ।
– शरीर दुख्ने समस्याको उपचार गर्नु छ भने पनि आजैबाट नियमित सिस्नोको प्रयोग गर्दा हुन्छ।
– सिस्नो जति काट्यो त्यति पलाउने भएकाले खेती गरे पनि लाभ उठाउन सकिन्छ। यसलाई तारे होटेलदेखि विदेशमा समेत बिक्री गर्न सकिन्छ।
– औषधिको प्रयोजनका लागि सिस्नोको अत्यधिक माग हुने भएकाले यसलाई विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ।
– यसको जरा औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ।
– सिस्नोमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, फाइवर, फस्फोरस र फलामजस्ता तत्व पाइन्छ।